Dharka ilaaliya dharka → Dharka shaqada • Qalabka P&M ee kumbuyuutarka
Dharka difaaca waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo nabadgelyada inta lagu jiro shaqada. Waxay sidoo kale yihiin shuruudo xeerarka caafimaadka iyo badbaadada. Isticmaalka qalabka si loo sameeyo ururinta noocan oo kale ah waxay u baahan tahay dhar gaar ah sababo la xiriira xaaladdooda gaarka ah ee isticmaalka.
Bixinta dukaankayaga, iyada oo qayb ka ah dharka difaaca, waad iibsan kartaa Maaskaro ilaalin ah, koofiyadaha, dharka aashitada aan u hayn (loogu talagalay dadka ku shaqeeya kiimikooyinka adag) iyo dharka kuwa xaabada ka jara (surwaal iyo maaskaro).
Thanks to isticmaalka waxyaabo tayo sare leh, dharka difaaca ayaa u adkeysanaya waxyeelada, saameynta waxyeelada leh ee arrimaha la xiriira shaqada la qabtay, sidoo kale wuxuu aad ugu adkaysanayaa nadiifinta joogtada ah ama maydhashada. Dacwadaha difaaca waxay ka kooban yihiin waxyaabo loo qaabeeyey isticmaalkooda loogu talagalay, dhammaantood si loo hubiyo badbaadada isticmaalaha. Suurtagalnimada ballaaran ee hagaajinta dharka waxay hubineysaa inay ku habboon tahay noocyo badan oo tirooyin ah iyo dadka dhererkoodu kala duwan yahay.
Dharka difaaca ilaalinta iyo raaxada shaqada
Dharka ka samaysan dharka PVC (aashitada-difaaca) ayaa u adkaysta kiimikada. Waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo aagagga halista ugu jirta taabashada walxaha sida asiidhyada, saldhigyada iyo hydroxides. Dharka difaaca ee lagu bixiyo dukaankeenna ayaa buuxiya shuruudaha EN13688, EN14605. Dharka difaaca ayaa sidoo kale ku jira dharka silsiladda silsiladda looga ilaaliyo dhaawacyada silsiladda (surwaal). Dharka oo ka kooban jaakad iyo surwaal ayaa leh faahfaahin badan oo lagu ilaalinayo heerarka amniga ugu sarreeya. Qeybta waxaa lagula talinayaa kuwa jaraya ama silsiladaha ka shaqeeya - waxay buuxinayaan shuruudaha EN13688 iyo EN381-5 (fasalka 2 (surwaal)).
Noocyadeenu waxay ka kooban yihiin dhar ilaalin shakhsiyeed oo casri ah oo ka samaysan suuf culus oo isku dhafan oo ah waxyaabo la soo saaray Sababtoo ah gaar ahaanta shaqada ee xirfado badan iyo shuruudaha waxqabadkooda, moodooyinka aan bixinno waxay tixgelinayaan shuruudahaan, iyagoo hagaajinaya cabirrada baahiyaha shaqsiyadeed ee la xushay.
Dharka takhasuska gaarka ah leh ayaa laga sameeyaa waxyaabo fara badan oo fududeeya isticmaalkooda. Raaxo ahaan, waxaa lagu qalabeeyay jeebado waasac ah, jiinyeerro si loo fududeeyo gelinta surwaalka, iyo xirmooyinka la xoojiyay si looga ilaaliyo waxyaabaha farsamada, kiimikada iyo jawiga.
Kahor intaadan wax ka iibsan kaayaga dukaan waxaan kugula talineynaa inaad nala soo xiriirto si aan u xaqiijino helitaanka alaabooyinka soo saarahayaga. Shaqaalaheena ayaa kuu jooga talo si aad u hesho xulashada dharka.
dharka ilaalinta betafilimada ilaalinta dharkadharka ilaalinta ee la tuurodharka ilaalinta caafimaadkadaboolida dharkadharka ilaalintadharka ilaalintadharka difaaca carruurtadharka ilaalinta ee koronto yaqaanadadharka ilaalinta ee dhakhaatiirtadharka ilaalinta alxankadharka ilaalinta dhakhaatiirta xoolahadharka dhawristadharka difaaca ee lagu buufiyodharka ilaalinta ee husqvarnadharka ilaalinta ee la tuurodharka ka ilaaliya kielcedharka ilaalinta caafimaadkadharka difaaca furuqaDharka difaaca ee PPEdharka alxanka ee ilaaliyailaali dharka ilaalintadharka ilaalinta dab-damiskasoo bandhigida waaxda dabka ee dharka ilaalinaysadharka shaqadabacaha difaaca dharka